अपाङ्गताको आरक्षणमा समस्या
विचार/विश्लेषण 18 पटक पढिएको २०७४ बैशाख १३ बुधवार
शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएकाहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समावेश गराउन सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई थोरै मात्रामा भए पनि जीवन जिउन केही सहज भएको छ ।
यो एकदमै राम्रो व्यवस्था हो । यसले विभिन्न अवसरका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ रोजगारीको अवसर पनि जुटाइदिनेभएकाले उनीहरुलाई हौसला पनि मिलेको छ । यस्ता व्यक्तिहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरुमा पनि सामान्य अपाङ्गता र विशिष्ट अपाङ्गता भएकाहरुको क्षमता फरक हुन्छ । तसर्थ अपाङ्गतको पनि विशिष्टताका आधारमा यस्तो आरक्षण छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले समतामूलक समाजको अभ्याससँगै अपाङगताको क्षेत्रमा विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन् । अपाङ्गताको क्षेत्रमा समयसमयमा विभिन्न आवाज उठ्दै आएका छन् । यसका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी क्षेत्रका सङ्घ सङ्गठनले अपाङ्गताको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । विविध प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समाजमा कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका छन् । जसमा दृष्टीविहीन, बहिरा, मानसिक अपाङ्गता र अन्य शारीरिक अपाङ्गता आदि छन् । यी सबै प्रकारका अपाङ्गतालाई एकै डालोमा हालेर सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि कोटा निर्धारण गरेका छन् । जुन पूर्ण रुपमा न्यायोचित होइन । यसमा सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छ । जटिल किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यसबाट वञ्चित हुनपुग्छन् । यसर्थ अपाङ्गता भएकाहरुका लागि राज्यद्वारा निर्धारण गरिएको आरक्षण पूर्ण न्यायसङ्गत देखिँदैन । यसलाई अपाङ्गताभित्रको विशिष्टताका आधारमा यसलाई छुट्याउन जरुरी छ ।
कोही कान सुन्न सक्दैनन्, कोही आँखा देख्दैनन्, कोही बोल्न सक्दैनन्, कोही मानसिक रुपमा कमजोर छन्, कसैका औँला बाङ्गा छन् । यस्ता फरक क्षमता भएका मानिसहरुलाई एउटै डालोमा हालेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु कसरी सम्भव हुन्छ ? अनि एकै किसिमबाट कोटा निर्धारणबाट गछौं आरक्षणको कुरा गर्छौँ । के अपाङ्गता भएका सबैलाई यो न्यायोचित छ त ? अवश्य छैन । आँखा नदेख्नेले पुस्तक पढ्न सक्दैन । उसलाई ब्रेल लिपिको सहयोग चाहिन्छ । यसमा सबैको पहुँच छैन । न त ब्रेल पुस्तक नै उपलब्ध छ । यस्तो अपाङ्गताको तुलनामा औँला बाङ्गो भएको व्यक्तिले अपाङ्गता कोटा प्राप्त गर्छ । दृष्टिविहीन व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छ र बेरोजगार हुन्छ । यसैले यो अपाङ्ग आरक्षणको व्यवस्था अव्यवहारिक भएन ?
अहिले अपाङ्गताको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्य गरिरहेका छन् । वार्षिक रुपमा अनुसन्धान अध्ययन भइरहेका छन् तर राष्ट्रको निर्धारित कार्यक्रममा अपाङ्गताको पहिचान अनुसार अवसर निर्धारण गर्न नसक्नु एक विडम्बना बनेको छ । कोटा निर्धारणमा अपाङ्गताको नाम बेचेर जोकसैले पनि खाने सजिलो माध्यम बनेको छ अपाङ्गता कोटा, त्यसैले आज एक दृष्टीविहिन हरेक कुरामा सक्षम बनेर पनि असक्षम र बेरोजगारी बन्न बाध्य छन् ।
अर्को पाटो हाम्रो मानसिकता पनि शारीरिक बनावट हेरेर छनोट गर्ने र दृष्टिविहीनले गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातन सोचबाट ग्रसित छ । अपाङ्गता विश्वभर फरक किसिमले सक्षम भनेर चिनिन्छ । व्यक्तिले दृष्टि गुमाए पनि ऊसँग भएको क्षमता र सीप गुमेको हुँदैन । भलै उसको आँखा नहोस् तर उसको कुशलताले हामी विभिन्न कार्य पूर्ण गर्न सक्दछौँ ।
राष्ट्रको सरोकारवाला निकायले अपाङ्गता कोटा विषयमा एक पटक सोच्ने बेला आएको छ । अहिले निर्धारित अपाङ्गता कोटाभन्दा दृष्टिविहीनलाई खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुनसक्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था अनुसार कोटा निर्धारण गर्नसके मात्र हरेक दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण रहन्छ । त्यसकारण अपाङ्गता शब्दको प्रयोग गरी जो कसैले खाने साधन बन्ने थिएन । यसका लागि सरकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारी नियमन हुनु जररुरी छ । स्रोत: रातोपाटी